Nin Denmark loo gacan galiyay | Somaliska
Nin Tunisiyan ah oo haysta dhalashada Sweden ayaa maxkamadi go’aamisay in loo gacan galiyo Denmark, ka dib markii lagu eedeeyay asaga iyo rag ay asxaabyihiin in ay qorshaynayeen in ay weerar ku qaadaan xarunta wargeyska lagu magacaabo Jyllands-Posten oo sanadkii 2005 soo daabacay kartoono lagu aflagaadeeyay nabi Muxamed (nnkh).
Sabhi Zalouti oo 37 sano jir ah ayaa lagu xiray magaalada Stockholm bishii December ee sanadkii la soo dhaafay. Qaadiga maxkamada ayaa sheegay in Sabhi Zalouti loo gacan galin doono Denmark iyadoo la raacayo sharciga midowga Yurub.
Ninkaan ayaa aqbalay go’aanka balse hal shuruud ayuu ku xiray oo ah in uu xabsiga ku qaato Sweden haddii la xukumo.
Denmark ayaa sheegtay in ninkaan loo haysto in uu qorsheynayay falal argagixiso oo isaga iyo asxaabtiisa doonayeen in ay xoog ku galaan xarunta wargeyska oo ay dilaan intii ay awoodaan.
Wargeyska Jyllands-Posten ayaa sanadkii 2005 ka careysiiyay Muslimiinta caalamka ka dib markii uu soo daabacay kartoono aflagaado ku ah rasuulka (scw). Ilaa waqtigaas ayaa xarunta wargeyska waxay noqotay goob aad loo ilaaliyo iyaadoo wiil Soomaali ah uu weerar ku qaaday ninkii sawiray kartoonada, wiilkaas ayaa lagu xukumay 29 sano oo xarig ah iyo in la musaafuriyo.